Iindaba -K-Tek kunye noMboniso
K-Tek kunye noMboniso
Emva kweminyaka elishumi yophuhliso, i-K-Tek ayinalo kuphela inani elikhulu labasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nezobuchwephesha kunye neqela lolawulo olugqwesileyo, kodwa ineqela lokuthengisa elihle kakhulu. Ukuvumela abathengi abaninzi ukuba basazi, sihlala sisiya kwihlabathi ukuya kuthatha inxaxheba kwimiboniso, enje nge-United States, i-United Kingdom, iJamani, iJapan njalo njalo. Siye sazi inani elikhulu labathengi kulo mboniso, banelisekile kakhulu ngumgangatho weemveliso kunye nenkonzo yethu, ngaxeshanye, abathengi abaninzi bamanye amazwe beze kutyelela umzi-mveliso weK-Tek kwaye baxoxa ngemicimbi yokusebenzisana. Inkxaso yakho yeyona inkulu Inkuthazo kuthi. Sinethemba lokubonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kubaxumi abaninzi abasweleyo. Siyakumema ngokunyanisekileyo ukuba usebenzisane kunye nokuphuhlisa kunye.
Izinto zethu eziqhelekileyo ziyintsimbi engenasici, i-aluminium, ubhedu, isinyithi esincinci, iiplastiki zobunjineli kunye nezinye iintlobo zensimbi ye-alloy, Sinokubonelela ngonyango lokushisa kunye nonyango olwahlukeneyo lwabathengi:
Iinkonzo zethu zokwenza izinto zibandakanya:
1) 5 Axis CNC Machining / CNC Milling / CNC Ivula ；
2) I-EDM yocingo lokusika / i-WEDM-HS / i-WEDM-LS ；
3) Ukugaya / Ukujika / Ukugaya.
Unyango lwethu lomphezulu lubandakanya:
Ukugqitywa kwesinyithi ngokuchanekileyo:
• Anodize (yesiqhelo / enzima)
• I-Electroless Nickel (Inc. emnyama)
• Ukuthambisa iZinc (uMnyama / uMnquma / Luhlaza / ……)
• Ukudibana kweKhemikhali ukuGquma
• Ukuhanjiswa (intsimbi engenanto)
• Ukuntywila kweChannel (Inc. Kunzima)
• Isilivere / ukutyabeka kwegolide
• Ukuqhushumba kwesanti
• ukutshiza umgubo
• UkuPolitwa kwe-Electro
• Isingxobo seToti
• Ukucoca intsimbi
• ukwenza mnyama
• IPVD njl.
I-K-Tek Machining ibonelela ngeenkonzo ze-OEM / i-ODM, Singenza ngokwezifiso ukuveliswa kwazo zonke iintlobo zamalungu oomatshini ngokuchanekileyo ngokweemfuno zabathengi, iimveliso ezinxulumene noomatshini, i-elektroniki, i-automation, izithuthi, ezonyango, amandla amatsha kunye nezinye iinkalo. Inkampani inezixhobo ezaneleyo zokuqhubekeka ngokuchanekileyo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo, umgangatho wezinto ezichanekileyo unokuhlangabezana nemigangatho yemizi-mveliso yehlabathi, iimveliso ezithengiswa phesheya.
I-K-Tek ikhethekileyo kumatshini wokulungisa ngokuchanekileyo. Iinkonzo eziManyanisiweyo ezizodwa zibuqaqambile ubuchule bazo kunye neenkqubo. Iinjineli zethu ziya kusebenza kunye nawe ukuqinisekisa ubuninzi bemigangatho yoyilo lokuvelisa kunye nokudibana. Iinkonzo ezigqwesileyo zabathengi kunye nokwoneliseka ziimpawu zenkampani yethu kunye nesiseko kwimpumelelo yeshishini lethu. Wamkelekile ukudibana: sales@k-tekmachining.com Inombolo yomnxeba: (+86) 0769-88459539
Ixesha Post: Oct-29-2020